Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ)
Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
မျိုးဥကြွေခြင်းကိုဖြစ်စေရန်နဲ့ အမျိုးသမီးများမြုံခြင်းကိုကုသရန်အတွက် သုံးပါတယ်။ အမျိုးသားများ သုတ်ကောင်အရေအတွက်များလာစေရန်အတွက် သုံးပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ဝှေးစေ့တွေ ကပ္ပါယ်အိတ်ထဲပုံမှန်အတိုင်း မကျဆင်းတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ပမာဏအများကြီးသို့အချိန်အကြာကြီး အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သင့်ဆေးညွှန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်း လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ကြွက်သားအောက်ကို သို့ အရေပြားအောက်ကိုထိုးဆေးအနေနဲ့ ပေးပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ သို့ အခြားကျန်းမာရေးကြီးကြပ်သူတွေက ထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ အိမ်မှာဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတာကို သင်ပေးထားပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုထိုးရမယ်၊ အပ်တွေ၊ ဆေးထိုးပြွန်တွေကို ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမလဲမသိရင် သေချာပြည့်ပြည့်၀၀နားမလည်ရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မထိုးသင့်ပါဘူး။ တစ်ခါသုံးစွန့်ပစ်အပ်တွေကို တစ်ကြိမ်သာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အပ်ကာခွက်ထဲထည့်ပြီး အပ်ကိုစွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ( ထိုပစ္စည်းမျိုးကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူထံမှာ မေးပြိး ဘယ်လိုစွန့်ရမလဲဆိုတာကို မေးသင့်ပါတယ်။)
အရောင်ပြောင်းနေရင် သို့ အရည်အတွင်းအခဲတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆေးကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
HCG သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
HCGအသုံးပြုခြင်းကြောင့် အဆင့်ဆင့်ကိုယ်ဝန်ရခြင်း( နှစ်မွှာပူး၊ သုံးမွှာပူး၊ လေးမွှာပူးစသဖြင့်) ရနိုင်ချေများစေပါတယ။် ကိုယ်ဝန်အဆင့်ဆင့်ရခြင်းက အမေအတွက်ရော ကလေးတွေအတွက်ပါ အန္တရာယ်များပါတယ်။ သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း သင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့အထူးဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း အကုန်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
သွေးခဲခြင်းလက္ခဏာများ – နာခြင်း၊ နွေးခြင်း၊ နီခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားရခြင်း(လက်မောင်းခြေထောက်နေရများတွင်၀ ၊ မရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ အလွန်အမင်းမူးဝေခြင်း၊ အပြင်းအထန်ခေါင်းကိုက်ခြင်းစတာတွေ တွေ့ရမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။
အချို့ဆေးအသုံးပြုသူအမျိုးသမ်းတွေမှာ သားဥအိမ်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ခြင်းရောဂါစုလို့ခေါ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပထမဆုံးကုသမှုခံယူနေစဉ်ကာလမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါ OHSSလက္ခဏာတွေတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ချက်ချင်းခေါ်သင့်ပါတယ်။
အမျိုးသားငယ်တွေမှာ လူပျိုဖော်ဝင်ခြင်းကို စောစေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးအသုံးပြုသူကောင်လေးမှာ အသံသြခြင်း၊ ဆီးခုံအမွေးများပေါက်လာခြင်း၊ ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်းကဲ့သို့သော
နာခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ သို့ ကသိကအေက်နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သားဥကြွေခြင်းကိုလှုံဆေြာ်ခင်း ( ဥမကြွေနိုင်ခြင်းက အဓိကမျိုးဥအိမ်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်တဲ့ ဒုတိယဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမှာ)
Chorionic gonadotropin: 5000 to 10,000 units အသားဆေး တစ်ရက်စာ menotropins.နောက်ဆုံးရက်နောက်ပိုင်းမှာအသုံးပြုပါတယ်။
Recombinant chorionic gonadotropin- 250 mcgအရေပြားအောက် တစ်နေ့စာ၊ သားဥလောင်းလှုံဆော်ပေးသည့်ပစ္စည်းနောက်ဆုံးဆေးအကြိမ်ပြီးနောက်
Hypogonadotropic hypogonadism( ပစ်ကျူတရီချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ )
500 to 1000 unitsအကြောဆေး တစ်ပတ်၃ကြိမ် ၃ပတ်၊ ထို့နောက် တူညီတဲ့ပမာဏကိုပဲ တစ်ပတ်၂ကြိမ် ၃ပတ်စာ
4000 units အကြောဆေး တစ်ပတ်၃ကြိမ် ၆လမှ၉လအထိ ၊ ထို့နောက် 2000 units တစ်ပတ်၃ကြိမ် နောက်ထပ်၃လ
ကလေးတွေအတွက် Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လုူပျိုဖော်မဝင်ခင် ကပ်ပါယ်အိတ်အတွင်း ဝှေးစေ့တစ်လုံးသို့နှစ်လုံးလုံးမဆင်းခြင်းအတွက် ( အသက်၄နှစ်မှ ၉နှစ်အတွင်းအဖြစ်များပါတယ်၊ ခနဓါဗေဒဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး)
4000 unitsအသားဆေး တစ်ပတ်သုံးကြိမ် ၃ပတ်
5000 units အသားဆေး လေးကြိမ်ထိုးဆေး
500 to 1000 units အသားဆေး ထိုးဆေး၁၅ကြိမ် ၆ပတ်ကျော်
500 units တစ်ပတ်သုံးကြိမ် ၄ပတ်မှ၆ပတ်အထိ ၊ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် 1000 unitsကို တစ်လကြာပြီးနောက် အစဉ်လိုက်ပြန်ထိုးပေးရပါမယ။်
Hcg (အိတ်ခ်ျစီဂျီ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ထိုးဆေးအတွက် 5000 units; 10000 units; 20000 units; recombinant 250 mcg; recombinant 250 mcg/0.5 Ml